काठमाडौँ । खराब खानपान र जीवनशैलीका कारण आजभोलि अधिकांश मानिस विभिन्न समस्याको सामना गरिरहेका छन्। खानामा आवश्यक पोषक तत्वको कमीका कारण मानिसमा थकान, कमजोरी, रगतको कमी र इम्युनिटी पावर कमजोर जस्ता समस्या देखिने गरेका छन्।
यस्ता समस्याका कारण मानिसको यौ’न जीवन प्रभावित बनिरहेको छ। यौन स्वास्थ्य र यससँग सम्बन्धीत समस्याबाट छुटकारा पाउनका लागि आयुर्वेदका उपाय अपनाउन सकिन्छ।
घ्यूः आयुर्वेदका अनुसार शरीरमा हुने एक प्रकारको शक्तिले शरीरमा महत्वपूर्ण कार्य गर्ने गर्छ। घ्यूमा पनि एक प्रकाशको शक्ति पाइने गर्छ। त्यसैले तपाईले शरीरमा शक्ति बढाउनका लागि दैनिक खानामा एक चम्चा घ्यू सामेल गर्नुहोस्। यसो यर्दा पनि तपाईको यौ’न शक्ति बढ्ने गर्छ।
फर्सीको मुन्टाका छन् यतिधेरै फाइदाः मधुमेह, क्यान्सर जस्ता समस्याका…
बेला-बेला गर्भाशयमा जलन भएको महशुस हुन्छ ? सावधान ! हुनसक्छ यस्तो खतरा
महः महमा पनि विभिन्न प्रकारका पौष्टिक तत्व पाइने गर्छ। हरेक दिन महको सेवन गर्दा विभिन्न समस्याबाट छुटाकारा पाउन सकिने आयुर्वेदमा उल्लेख गरिएको छ। महमा बोसोन नामक एक खनिज हुने गर्छ। जसले टेस्टोस्टेरोनलाई बढाउने काम गर्छ। तपाई विहान उठेर आफ्नो चियामा एक चम्चा मह मिलाएर खानुहोस्। तर याद राख्नुहोस् की दूधमा भूलेर पनि कहिलै मह नमिलाउनुहोस्।
दूधः दूधमा विभिन्न प्रकारको पोषक तत्व पाइने गर्छ। जसले प्रयाप्त शक्ति र उर्जा प्रदान गर्छ। त्यही कारण भारतीय संस्कारमा विवाहको पहिलो रातमा मसलेदार दूध पिउने अवधारण रही आएको छ। तपाईले एक गिलास तातो दूधमा अश्वगंधा वा एक चम्चा घ्यू, थोरै सुकमेल र एक चुटकी केसर मिलाएर पिउँदा पनि यौन शक्ति बढ्ने गर्छ।
चामलको खिरः दूध, घ्यू, सुकमेल, केसर आदी राखेर बनाएको चामलको खिर शक्तिवद्र्धक हुने गर्छ। यो खिरको सेवनले पनि तपाईको यौन शक्तिमा अद्भूत शक्ति प्रदान गर्छ।
अमलाः अमलामा भिटामिन सी, एक्टिअक्सीडेट र एन्टीफ्लेमेट्री तत्व पाइन्छ। जसले पुरुषलाई जवान र शक्ति प्रदान गर्छ। अमलाले कपाललाई पनि सधैँ कालो बनाउन सहयोग गर्छ भने छालालाई टाइट राख्न सहयोग पुर्याउँछ। त्यसैले हरेक पुरुषले विहान एउटा अमलाको नियमित सेवन गर्नु निकै लाभदायिक हुनेछ।